Apple wuxuu raadinayaa qof qora afka Faransiiska ee Siri - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Apple wuxuu raadinayay qof uu ku qoro gabagabada Faransiiska ee Siri
Haddii aad dareento nafta joornaalka, waa inaad ogaataa in Apple uu raadinayo musharax Faransiis ah inuu qoro sirta Siri ...
Waa kuwan soo socda oo ah in ay daneynayaan muusikada Faransiiska: Apple wuxuu raadinayaa musharax si uu u qoro joornaal Siri. Warka wanaagsan, shirkadda Maraykanku uma baahna inaad noqoto arday khabiir ah ama injineer. Sidaa daraadeed, Apple si ay u hagaajiso kaaliyaha codka.
Musharrixiinta Faransiisku waxay doonayaan Apple in ay wax ka taraan Siri
Halkan waa soo wacitaanka codsiyada oo soo jiidi kara dad badan. Dhab ahaantii, Faransiiska hoos yimaada ee Apple ayaa kaliya soo saartay ku dhawaaqid in qof loo qoro si loo wanaajiyo Siri. Ilaa intaa ka dib wax aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, waa kuwan soo socda oo ah mid la yaab leh, maxaa yeelay waxay si gaar ah u khuseysaa qoritaanka Faransiiska.
Apple wuxuu raadiyaa qoraa jecel inuu qoro qoraalo cajiib ah, gaar ahaan marka lala xiriiro warka. Tani waa sida loo sameeyo Siri si aad ugu dhexgalaan isticmaalaha. Shaacinta ayaa lagu soo daabacay shabakadda caanka ah ee LinkedIn dhamaadkii Jannaayo.
Tani waa boostada saacadaha 35. Shaacinta waxay muujineysaa in shirkadu raadinayso " qoraaga hal-abuurka caalamiga ah Si " Siri wadahadal cusub oo Faransiis ah ". Inta kale ee sharaxaadda ku saabsan nooca musharaxa la doonayo waa ka dibna si cad.
Si aad u codsato, bac + 3 ayaa loo baahan yahay
Musharraxa mustaqbalka waa inuu ka mahadceliyaa " luqadda, punks iyo sheekooyinka ". Xirfadaha waxaa looga baahan yahay inay qoraan wada sheekaysi " khiyaano ". Sidaa darteed waa arrin qoraal ah oo kaftanka ah oo ah heer sax ah, oo la xiriira warar iyo dhacdooyin dhaqameed kala duwan.
Waxay sidoo kale lagama maarmaan u tahay inay yeeshaan xirfado kale si ay u noqdaan nasiib la doorto ee Faransiiska Faransiiska ee Apple. Xaqiiqdii, waa in aynnu turjunnaa wada-hadalo kala duwan oo ka mid ah qorayaasha Maraykanku, oo awoodaana inay saxaan kuwa asxaabtiisa. Sidaa darteed waxay noqon doontaa mid raaxo leh Ingiriisi.
Tani sidoo kale waa shuruud lagu dalbado Apple, sida xiisaha wararka iyo dhaqanka caanka ah. Oo weliba way ka sii fiicnaan lahayd haddii aad waligaa taageerto muusikada casriga ah, oo aad macallin ku leedahay ereyo Faransiis ah, iyo sidoo kale naxwaha. Haddii aadan haysanin shahaadada dhakhtar ama shahaadada mastarka ee jagadan, waa inaad walibaa ugu yaraan bac + 3.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/apple-cherche-quelquun-pour-ecrire-des-blagues-en-francais-sur-siri-311969
Tijaabooyinka Twitter waxay ku sameeyaan jawaabaha ku saabsan wadahadalka